Nanovest Apk Dhawunirodha Ye Android [Kuwana App] - Luso Gamer
Indonesia zvakare inovhara chikamu chikuru chevashandisi veAndroid. Zvakadaro vazhinji veavo vashandisi ve smartphone vanotsvaga mikana yekuwana online. Saka kutarisa mhinduro dzekutsvaga uye vashandisi veandroid vanokumbira vagadziri vakagadzirwa Nanovest Apk.
Zvechokwadi, the Kuwana App inopa uyu mukana wepamhepo wekudyara uye kuwana purofiti yakanaka. Maitiro ekuwana purofiti ari nyore uye haadi yakasarudzika tarenda kana hunyanzvi. Zvese zvavanoda ndeyekushanda kwefaira rekushandisa.
Izvo zvinosvikika kurodha kubva pano nekudzvanya kumwe chete. Kunyangwe pano tichatsanangura maitiro ese ekuwana uye kuita purofiti yakanaka munguva pfupi. Kana iwe wanga uchitsvaga yakafanana chikuva wobva warodha Nanovest App.
Chii chinonzi Nanovest Apk
Nanovest Apk ipuratifomu yekuwana online apo nhengo dzakanyoreswa dzinoda kuisa mari. Kunyangwe isu tisina chokwadi nezve chokwadi. Asi pano pane Android vashandisi vanokumbira taunza iyi yakadzama wongororo pakushandisa.
Tichiri kuongorora musika wepamhepo takawana akawanda akasiyana mapuratifomu akafanana. Avo vanoti vanopa masevhisi akafanana mahara. Asi isu tinogona kuvimbisa vanhu kuti mazhinji emapuratifomu anotaurika ndeemanyepo uye enhema.
Izvi zvinoreva kuisa mari mumapuratifomu akadaro kunoratidzika kunge kune ngozi uye kupusa. Nekuti hapana vimbiso inobatanidzwa yekudzorera mari. Kunyangwe vazhinji venharembozha vanotonyoresa zvichemo maererano nekubiwa kwepurofiti uye ruzivo.
Tichifunga nezvezviitiko zvekare uye zvikumbiro zvevashandisi. Ivo vanogadzira vanozodzoka neiyi inoshamisa android chikuva inozivikanwa seNano Vest Android. Izvo ndezvemahara kurodha uye zvinoita sekuvimbika maererano neiyo interface uye kushandiswa.
zera 74.73 MB
Package Zita com.nanovest.prod
Tisati tachera mune chikuru ruzivo uye maitiro ekuwana. Tinoda kuwedzera ruzivo urwu, iyo application inotsigirwa zvizere nevechitatu bato. Zvinoreva kuti isu hatimbofa tiri vega chero vimbiso yechimwe chigadzirwa.
Asi pano isu tinogona kupa ruzivo rwakabatana nepuratifomu. Kana tikataura nezve maitiro ekuwana mari kuburikidza nekunyorera. Ipapo takawana matanho matatu ekutanga ekuwana purofiti. Matanho ekutanga anosanganisira ekutumira zvinongedzo zvinogona kugovaniswa pakati pevanhu vanozivikanwa.
Ngatitii kana paine munhu akateedzera chinongedzo chako uye azvinyorese papuratifomu. Ipapo anotumirwa account account inopihwa 25k rupiah. Chechipiri nzira yekuwana mari kuzadzisa maitiro eKYC.
Mune iyi chaiyo maitiro, chikuva chinoisa mari muakaundi huru kana mushandisi apedza zvitupa zvake zvine chekuita neaccount. Komisheni yekupedzisa KYC inogona kumaka kusvika ku40k rupiah iyo inogona kuregererwa.
Yekupedzisira maitiro ekuwana mari ndeyekudyara mari chaiyo muchimiro chestock. Iwo anosvikika online stocks anosanganisira Amazon neTesla etc. Saka iwe unofarira maitiro uye wakagadzirira kuisa mari online wozoisa Nano Vest Dhawunirodha.
Kuisa iyo app kunopa zvese kuwana uye kudyara.
Mari inogona kuwanikwa zvakananga kuburikidza nekudyara.
Mari yemahara inogonawo kuwanikwa kuburikidza nekutumira.
Kuzadzisa KYC kunogona kupawo komisheni.
Mibayiro yakawanda iripo.
Screenshot yeThe App
Maitiro ekurodha Nanovest Apk
Patakataura nezve kurodha yazvino vhezheni yeApk mafaera. Vashandisi veAndroid vanogona kuvimba newebhusaiti yedu nekuti pano pawebhusaiti yedu tinongopa echokwadi uye epakutanga mafaera eApp. Kuti uve nechokwadi chekuchengetedzwa kwemushandisi uye kuvanzika.
Takahaya timu yenyanzvi inoumbwa nenyanzvi dzakasiyana. Kunze kwekunge nyanzvi yedu ine chokwadi nezve kushanda zvakanaka kweNano Vest Apk. Isu hatife takapa iyo inoshanda vhezheni yeApk mukati yekurodha chikamu chevashandisi veandroid.
Rangarira kuti application yatiri kutsigira pano haina kumbova yedu. Izvi zvinoreva kuti kodzero dzekushandisa zvakare dzine hukama kune wechitatu bato. Takaona chikuva chine njodzi maererano nekushandiswa. Saka isa mari nenjodzi yako.
Mazhinji emamwe maapplication eAroid anowanikwawo kurodha kubva pawebhusaiti yedu. Kuti utarise izvo zvimwe zvinobatika application ndapota tevera zvinongedzo. Ndivo Fiewin Apk uye JadiDuit Apk.
Saka iwe uri kutsvaga yakanakisa online platform yekuisa mari. Ipapo isu tinokurudzira avo vashandisi veIndonesia Android kuisa Nanovest Apk. Izvo zvemahara kurodha kubva pawebhusaiti yedu nekudzvanya kumwe chete.
Categories mari, Apps Tags Kuwana App, Nanovest Android, Nanovest Apk, Nanovest App, Vadivelu Comedy Nanovest Download Post navigation